१३ औं सागमा नेपाली चेलीले राखेकाे सान ! | | Neplays.com
१३ औं सागमा नेपाली चेलीले राखेकाे सान !
दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको १३ औं संस्करणमा नेपालले ऐतिहासिक स्वर्णपदक जितेर सफल प्रतियोगिताका रुपमा यो सागलाई लिएको छ । सागको इतिहासमा सबै भन्दा धेरै स्वर्ण जितेर नेपालले नयाँ इतिहास बनाएको छ ।
आठौं संस्करणमा ३१ स्वर्ण जितेर नयाँ इतिहास बनाएकोमा त्यसलाई फेरी १३ औं सागमा तोडेको छ । नेपालले शनिबारसम्म कुल ४३ स्वर्ण जितेको छ । यसपटकको सागमा ५० स्वर्णको लक्ष्य राखेकोमा नेपालले त्यो पुरा गर्ने संभावना पनि रहेको छ । तर त्यसका लागि नेपालले पौडी, जुडोमा स्वर्ण जित्न आवश्यक रहेको छ ।
यसपटकको सागमा नेपालले अहिलेसम्म हात पारेको उपलब्धिको मुंल्याकन गर्दा नेपालका लागि महिला खेलाडीको योगदान धेरै रहेको छ । नेपालले अहिलेसम्म जितेका ४३ पदकमा २४ पदक महिला खेलाडीले दिलाएका छन । यतिमात्र होइन महिला खेलाडीले सागमा धेरै खेलमा पहिलो पटक स्वर्ण जित्दै नयाँ इतिहास पनि बनाए । एकै सागमा दुई स्वर्ण जित्ने कीर्तिमान पनि बनाए ।
एकै सागमा २ स्वर्ण जित्ने महिला खेलाडी
दुई बच्चाकी आमा भएर एकै सागमा दुई वटा स्वर्ण जित्ने कीर्तिमान आयशाले तेक्वान्दोको पुम्से विधामा गरिन । उनले ब्यक्तिगत र टिम इभेन्ट्समा यो रेकर्ड बनाइन । जसका कारण उनको चर्चा यतिबेला निकै भइरहेको छ । पूर्व ओलम्पियन तथा चार पटक सागका स्वर्णपदक विजेता दिपक विष्टकी पत्नी आयशाले तेक्वान्दोको पहिलो दिन नै ऐतिहासिक पदक दिलाइन ।
ओलम्पिकमा सबैभन्दा कम उमेरमा सहभागिता जनाउने कीर्तिमान बनाएकी गौरीकाबाट यसपटकका सागमा ठुलो आशा गरिएको थियो । अघिल्लो सागमा रजत पदकसम्म जितेकी गौरीकाले घरेलु भूमीमा भइरहेको सागमा पौडीको पहिलो दिन नै नयाँ इतिहास बनाइन ।
पौडीको इतिहासमा पहिलो पटक दुई वटा स्वर्ण जितेकी गोरीकाले ब्यक्तिगत २ सय मिटर फ्रिस्टाइलमा राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण जितिन । त्यसपछि अर्को दिन उनले दुई सय मिटरको ब्याकस्ट्रोकमा स्वर्ण जितिन ।
गौरीका र आयशा त यसपटकको साग दुई वटा स्वर्ण जित्ने महिला खेलाडी हुन । आयशाको प्रतिस्पर्धा सकिएपनि गौरीकाका लागि सागमा स्वर्णपदकमा ह्याट्रिक गर्ने निकै सुनौलो मौका रहेको छ । उनले अझै पनि पाँच वटा स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्न बाँकी नै छ ।
गौरीका र आयशा बाहेक यो सागमा नेपाललाई इतिहास बनाउन सहयोग गर्ने महिला खेलाडी यसप्रकार छन ।
कराते (टिम काता, महिला) निर्मला तामाङ, संगिता मगर, सरु कार्की
कराते (४५ केजी मुनी) (कुसुम खड्का
कराते (५० केजी मूनि) (अनु अधिकारी
कराते (६८ केजी) (सुनिता महर्जन
कराते (६८ केजी) (अनुपमा मगर
तेक्वान्दो पुम्से (२३-२९ वर्ष) पार्वती गुरुङ
तेक्वान्दो पुम्से (२९ वर्ष माथि) आयशा शाक्य
तेक्वान्दो पुम्से (२९ वर्ष माथि) (आयशा शाक्य र सञ्जिकुमार पाण्डे)
पुम्से महिला टिम (१७-२३ वर्ष) निशा दर्नाल, स्वस्तिका तामाङ र सन्जिला तिमल्सिना
पुम्से महिला टिम (२३-२९ वर्ष) निता गुरुङ, प्रशंसा क्षेत्री र शुसिला राई
तेक्वान्दो (४६ केजी मुनि) (काजल श्रेष्ठ)
ट्रायथलन सोनी गुरुङ
उसु (थाउलो) सुस्मिता तामाङ
एथलेटिक्स (१० हजार मिटर ) सन्तोषी श्रेष्ठ
साइक्लिङ (डाउनहिल) निश्मा श्रेष्ठ
तेक्वान्दो (६२ केजी मुनि) संगीता बस्याल
उसु (थाउलो) नान्दौ निमा घर्तीमगर
साइक्लिङ (क्रस कन्ट्री) लक्ष्मी मगर
पौडी (२०० मिटर फ्रिस्टाइल)– गौरिका सिंह
पौडी २००मिटर ब्याकस्ट्रोक (गौरीका सिंह)
भारोत्तोलन (५९ केजी) सन्जु चौधरी
उसु (५६ केजी) जुनी राई
कुस्ती (५५ केजी) संगिता धामी
यसपटकको सागमा नेपालले धेरै खेलमा स्वर्ण जित्ने कीर्तिमान पनि बनायो । यसअघिका सागमा नेपालले विशेष गरि तेक्वान्दो, कराते, उसु, जुडो एथ्लेटिक्समा बढि पदक जितेको थियो । यसपटक नेपालले १० फरक खेलमा स्वर्ण जित्न सफल भयो । जसमा कराते, तेक्वान्दो, उसु, साइक्लिङ, भारत्तोलन, कुस्ती, पौडी, एथ्लेटिक्स, गल्फ, ट्रायथोलनमा स्वर्ण हात पार्यो । जुन आफैमा सफलता हो ।
यो सागले नेपाललाई एउटा राम्रो पाठ पनि सिकाएको छ । जसमा प्रतियोगिता आयोजना कसरी गर्ने भन्ने । यसपटकको सागमा ब्यवस्थापनमा भने ठुलो कमजोरी देखियो । कुनै खेलमा खेल सामाग्रि नभएको, कुनैमा विकल्पका रुपमा हुनुपर्ने सामाग्रि प्रयोग नगरिएको लगायतका छन ।
यतिमात्र होइन, अन्तिम समयमा हतार हतार पुर्वाधार बनाउँदा प्रतियोगिताको सफलतामा पनि प्रश्न उठाउने धेरै ठाँउहरु रहेका छन ।